Success Mobile: November 2013
iOS7myanmar fonts ကို jail break မလုပ်ပဲ ထဲ့နည်း
iOS7myanmar fonts ကို jail break မလုပ်ပဲ ထဲ့နည်းကို မောင် စီစဉ်လင်း မှ
Myanmar Mobile Users Club တွင်ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1. Go to this link from iOS7 device
Zawgyi-Ghost Font on iOS7without Jailbreaking
1.Open http://cl.ly/311I2y3T0t2w in mobileSafari
Labels: iOS, Myanmar Font
MMSD founder တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Developer ဖြိုးချမ်း ရဲ့
MPT Service v1.1(Offical) ဖြစ်ပါတယ်။
App အတွင်းမြန်မာလိုအညွန်းများပါဝင်ခြင်းကြောင့်အဆင်ပြေပြေ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။ Service တစ်ခုခြင်းဆီရဲ့အချက်အလက်များကို App အတွင်းရေးသားပေးထားပါတယ်။ Google Play Store ကနေ တိုက်ရိုက်ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။
Play Store ကနေ မဒေါင်းနိုင်သူများ
Posted by စိုင်း ခမ်းခေါင် at 4:49 AM
Labels: Andriod, MPT Service
GSM/WCDMA များ message မှတစ်ဆင့် အင်တာနက် လျှောက်ခြင်း
လက်ရှိမှာတော့ MPT ရဲ့ GSM/WCDMA ကဒ်တွေ ပဲ message ကနေ အင်တာနက်လျှောက်လို့ ရပါသေးတယ်၊ အရင် ၁၅ သိန်း ဖုန်းရော၊ ငါးသိန်း ဖုန်းရော။ နှစ်သိန်း ၊ နှစ်သိန်းခွဲ ဖုန်းရော၊ အခု တစ်ထောင့်ငါးရာ ဖုန်းရော အကုန် ရပါတယ်ဗျာ၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့
အရင်ဆုံး message ကိုဖွင့်
to နေရာမှာ 1331 ကို ထည့်
Orderdata service လို့ထည့်ပီး send လိုက်ပါဗျာ
ခဏနေရင် message တစ်စောင်ပြန်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်၊ ပိုက်ဆံ တစ်သောင်းနဲ့ ၂၅ ကျပ်ဖြတ်သွားပါလိမ့်မယ်။
အင်တာနက် setting တွေ ထည့်ပီးသားဆိုရင် အင်တာနက် စသုံး လို့ရပါပြီ၊ သူကတော့ ဖုန်းကို restart လုပ်ခိုင်း ပါလိမ့်မယ်။
အင်တာနက် setting မထည့်ရသေးရင်တော့
wireless and network ကိုသွား
mobile networks ကိုသွား
access point name ကိုသွား
mptnet ဆိုတာလေး မပါခဲ့ရင် အသစ် ထပ်ထည့်ပေးရပါမယ်
menu ကို နှိပ် new apn ကို နှိပ်
name နဲ့ apn မှာ mptnet ကိုထည့်
authentication type မှာ pap or chap ထည့်
apn type မှာ ဘာမှ မထည့်နဲ့
တစ်ကယ်လို့ password prompt ပါခဲ့ရင် #777 ကိုထည့်ပေး(y210c တွေမှပါ)
ပီးရင် menu ကိုပြန်နှိပ် save apn ကိုရွေးပေး နောက် mptnet ဆိုတာ ပေါ်လာရင် အဲဒီမှာ တစ်ချက်နှိပ်
ဖုန်းကို restart လုပ်ပီးရင် အင်တာနက် သုံးလို့ရပါပြီ
Posted by စိုင်း ခမ်းခေါင် at 7:15 AM
Call waiting = ဖုန်းပြောနေစဉ်အတွင်း တခြား ဖုန်း တစ်လုံး ဝင်လာသည်ကို သိရှိခြင်း၊ second call ကို လက်ခံနိုင်တာပါ
call forward= ဖုန်း မအားလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့် ဖုန်း လက်ခံနိုင်ခြင်း မရှိပါက တခြား (ကြိုတင်သတ်မှတ်ပေးထားသော) ဖုန်း တစ်လုံးကို အလိုအလျှောက် ဆက်သွယ်ပေးခြင်း
Voice Mail= ကိုရီးယား ကားများထဲတွင် ပါပါသည်၊ (လူကြီးမင်း ခေါ်ဆိုသောဖုန်းမှာ ဆက်သွယ်၍ မရနိုင်ပါသဖြင့် ဆက်သွယ်၍ ရရှိချိန်တွင်ပြန်လည်ပြောပြနိုင်ရန် အမှာစကားများ မှာကြား ခဲ့နိုင်ပါသည်၊ မှာကြားခဲ့လိုပါက 1 ကိုနှိပ်ပါ) အဲလိုပြန်ပြောမလားမသိ
Miss Call alert= ဖုန်း ပိတ်ထား လျှင် သော် လည်းကောင်း၊ ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာ ပြင်ပသို့ ရောက်ရှိနေချိန်တွင် သော်လည်းကောင်း အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ဖုန်း မကိုင် မိပါက လိုင်းရသည့်နှင့် မည်သူက မည်သည့် အချိန်က ခေါ်ပါသည် ဟု sms ပို့ပေးခြင်း
@ Success Mobile.
အထက်ပါ service များကို ပြန်ဖျက်လိုပါက Cancel XXX (XXX ဆိုသည်မှာ စတင်လျှောက်ထားစဉ်က Orderdata အနောက်မှ စာလုံးများဖြစ်ပါသည်) ကို 1331 သို့ ပြန်ပို့ နိုင်ပါသည်။ လက်ရှိ တစ်လ စာ ဖြတ်ပီးမှ နောက်လတွင် ပျက်သွားပါလိမ့်မယ်။
VMS အတွက် လစဉ်ကြေး အပြင် ပြောသူ (ချန်ခဲ့သူ) မှလည်း တစ်မိနစ် ၅၀ ကျပ် ပေးရမည် ဖြစ်ပြီး ပြန်နားထောင်သူ မှလည်း တစ်မိနစ် (၅၀) ကျပ် ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by စိုင်း ခမ်းခေါင် at 6:28 AM
wellcom A90+ သမားတွေအတွက်ပါ၊
root လုပ်လိုက်မိလို့ firmware ကြောင်သွားပီး ဟိုလို လုပ်မရ ဒီလိုလုပ်မရ ဖြစ်နေသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်၊
အရင်ဆုံးတော့ root လုပ်ထားပီးသားဖြစ်ရပါမယ်၊
၁၊ http://www.mediafire.com/?kt4xefxtytqycvy ဒါလေးဒေါင်းပီး သွင်းလိုက်ပါ။
၂၊ http://dl.xda-developers.com/attachdl/00feee715c0a7791b5ffbf56a06620dc/51a83125/9/2/9/7/7/7/Modded_Recovey(4PDA.ru).zip ဒါလေးဒေါင်းပီး unzip လုပ် အထဲက .img ကို sd card root မှာ ထည့်ထားပေး
၃၊ http://199.91.152.93/gnrfqzhbrtog/q92e83s4zn3arhh/SilveLight-4.zip ဒီဟာကို ဒီအတိုင်း sd card root မှာ ထည့်ထားပေး၊ ၄၊ အားလုံးပီးရင် mobile uncle (၁) ကို run ပေးပါ၊ get started ကို နှိပ်ပါ၊ flash recovery from sd card ကို ရွေးပေးပါ၊ ( ၂) ကနေ unzip လုပ်ထားတဲ့ img လေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်၊ နှိပ်ပေးလိုက်ပါ၊ ပီးရင် restart ကျ သွားပီး recovery ကနေ ပြန်ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်၊ modded recovery ပါ၊
၅၊ အဲဒီကနေ flash from sd ကိုရွေးပေးပီး (၃) က ဒေါင်းထားတဲ့ silver light4ကို ရွေးပေးပါ
သူ့ဘာသာ အင်စတောလုပ်သွားပီးရင် return ကို ပြန်ရွေးပေးပါ၊
၆၊ wipe data ကို ပြန်ရွေးပေးပီး wipe all လုပ်ပါ၊ reboot လုပ်ပါ ခဏစောင့်ပါ လှပတဲ့ silver light rom နဲ့ သွက်လက်တဲ့ wellcom a90+ ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပီ
Posted by စိုင်း ခမ်းခေါင် at 11:16 PM
Labels: Andriod, Custom Rom
အတော်တိုင်ပတ်တဲ့ကောင်လေးပါလား usb debug လုပ်ပြီး vroot နဲ့ ကိုင်မယ် ဆိုပြီးတော့ vroot လေးဖွင့် usb ကြိုး ကောက်ထိုး၊ ဟိုက် ဘာမှကို မဘာပါလား၊ အဲဒါနဲ့ device manager ထဲသွားကြည့်ပြန်တော့လည်း conflict ဖြစ်နေတာ တစ်ခုမှမရှိ၊ driver လိုက်ရှာတော့လည်း ဘယ်မှာမှမတွေ့ အင်း တိုင်တော့ပတ်ပြီ၊ noti ဘားကို ဆွဲချကြည့်တော့လည်း usb debug နဲ့ usb storage က ရနေတယ်၊ ဘာနဲ့လုပ်ရင်ကောင်းမလည်း ဆိုပီး z4root လေး usb drive mode ကနေ ထည့် အင်စတောလုပ်ကြည့်၊ root လုပ်ကြည့်တယ် successful ဆိုပဲ၊ ပျော်သွားတာဗျာ၊ restart ချ ပြန်တက် လာတော့ pro myankey လေးထည့် bagan kb pro လေးထည့်၊ pro myankey ကို run တော့ ဇော်ဂျီ ထည့်ရန် ဆိုတာလေးနှိပ် အင် super user request လည်းမတောင်း ဘာမှ မလုပ် အဲဒါနဲ့ပဲ root checker နဲ့ စစ်တော့ root မလုပ်ရသေးပါတဲ့၊ ဟမ် ခုနက သေသေချာချာ successful ဖြစ်ပါတယ်၊ အမြင်များ မှားတာလားဆိုပီး second round ပြန်လုပ်၊ စက်ပြန်တက်လာတော့ super user လေးနဲ့ ဟဲဟဲ ဘယ်ရမလဲ ဆိုပီး pro myankey ပြန် run ဖေဇော်ဂျီ ပြန်ထည့် မရပါခင်ဗျ၊ အဲလိုနဲ့ နာရီဝက်လောက်ကြာနေပီ၊ ဘာလုပ်ရင် ကောင်းမလဲ၊ ကဲ နောက်တစ်နည်း z4root ကို ပါမင်းနင့် ရု မလုပ်ခိုင်းပဲ temp root လုပ်ခိုင်းကြည့်တယ်၊ successful တယ်၊ ပြန်ထွက်တယ်၊ promyankey နဲ့ ဖေဇော်ဂျီ ပြန်ထည့်တယ်၊ အံမယ် super user request တောင်းသဟ၊ ကဲ ဆက်လုပ်ပီ၊ ရပီ၊ input method မှာ myan key ရိုးရိုးနဲ့ bagan kb pro နှစ်ခုထည့်ထားပီး စမ်းကြည့် အားလုံးအိုကေ၊ ကဲ restart ချရင် root ပျောက်မယ် ချတယ်ကွာ၊ မရလည်းနေဆိုပီး ကိုင်လိုက်တာ၊ အင်း တော်သေးတာပေါ့ ဒေါ်အေးသာကျော့ root မဖြစ် တော့ဘူး၊ မြန်မာစာတော့ မပျောက်ဘူး၊ အားလုံးအိုကေ၊ အော် အတော် တိုင်ပတ်ပါလား ဒီနေ့တော့
Posted by စိုင်း ခမ်းခေါင် at 10:27 PM
Labels: Andriod, Myanmar Font, Root
Emotion Ui သုံး huawei တွေအတွက် font ပါပြီး theme များ
FAQ (1) (Q) Emotion Ui ဆိုတာဘာလဲ
(A) Emotion Ui ဆိုတာ အခုနောက်ထွက်လာတဲ့ huawei ဖုန်းတွေမှာ သုံးထားတဲ့ UI (user interface) တစ်မျိုးပါ
(2) (Q) ဘယ်ဖုန်းတွေမှာ ပါဝင်သလဲ
(A) Huawei Y300-0000, g510, g520, c8813, c8813d အဲလို ဖုန်းတွေမှာ ပါတာပါ
(3) (Q) Emotion Ui ပါမှန်း ဘယ်လိုသိရမှာလဲ
(A) ဖုန်းမှာပါတဲ့ Setting, about phone, system update မှာ ကြည့်လိုက်ပါ
(4) (Q) ဘယ်လိုထည့်ရမှာလဲ Emotion Ui မှာ အဲဒီ theme တွေကို
(A) ဖုန်း နဲ့ ကွန်ပျူတာကို ချိတ်ပီး ဖုန်းမှာ usb storage mode ပြောင်းလိုက်ပါ၊ ဖုန်း internal memory ထဲမှာ HWtheme ဆိုတာ ရှိပါတယ်၊ အဲဒီထဲကို ခုနကဒေါင်းထားတဲ့ .hwt ပါ file တွေကို ကူးထည့်လိုက်ပါ၊ နောက် usb ကြိုးဖြုတ် ခနစောင့် ပီးရင် theme ကိုသွား အဲဒီကမှ နောက်ထပ်တိုးလာတဲ့ theme ကိုရွေး apply လုပ်၊ theme with font ကိုရွေးပေး ပီးတော့မှ restart လုပ် ပီးရင် သုံးလို့ရပါပီ
Posted by စိုင်း ခမ်းခေါင် at 10:12 PM
Labels: Andriod, Emotion Ui, Myanmar Font